AirTags lumay ayaa laga heli karaa xitaa iyadoo la adeegsanayo Android | Waxaan ka socdaa mac
AirTags lumay ayaa laga heli karaa xitaa iyadoo la adeegsanayo Android
Ugu dambeyntiina Apple waxay soo bandhigtay wixii lagu xantaa (ma aqaano aniga oo aan rabin) AirTag. Qeybahan yar-yar ee naga caawin doona inaan alaabteena marwalba ku heyno mahadnaqa Raadinta Shaqadeyda. Shalay waxaa loo soo bandhigay iyagoo adeegsanaya fiidiyow aad u qosol badan oo jilaya fadhiga. Laakiin waxa ugu muhiimsan ama ugu yaraan mid ka mid ah waxyaabaha ka dhigaya badeecadan inay tahay mid ku habboon NFC.Tani waa muhiim maxaa yeelay maxaa dhacaya haddii aan waayno AirTag? Qalab kasta oo NFC ah ayaa la jaan qaadi doona iyaga waanan la socon karnaa oo ogeysiin karnaa milkiilahooda.
Marka AirTag lagu dhejiyo qaab lumay, Dhammaan qalabka NFC-karti u leh, oo ay ku jiraan kuwa socda Android, ayaa akhrin kara farriinta daah-furka raadiyaha goob-jooge, oo ah muuqaal yar oo muhiim ah oo suurtagal ah oo gacan ka geysan kara soo-celinta alaabta lumay. Markaa uguyaraan waa lagaheli karaa waxa lagu aasaasay dukumiinti taageero cusub oo bixiya faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan shaqeynta.
Sida laga soo xigtay Apple, soo qaadista iyo taabashada qaybta cad ee AirTag lumay qalab NFC karti u leh waxay u weecineysaa bog internet oo soo bandhigi kara lambarka taleefanka milkiilaha. Macluumaad dheeraad ah sida lambarka taxanaha ah ee AirTag ayaa sidoo kale la bixiyaa. Isticmaalayaasha AirTag waa inay bixiyaan macluumaadka xiriirkooda inta lagu guda jiro hawsha dejinta. Iyo sidoo kale gelinta qalabka qaab lumay tan si ay u shaqeyso.
Waad daawan kartaa farriinta Habka lumay on kasta oo casriga NFC-karti leh, sida taleefanka iPhone ama Android.
Waxqabadkaani wuxuu noqon karaa mid aad waxtar u lehinkasta oo habka aasaasiga ah ee isgaarsiinta AirTag uu yahay raadiye heerkiisu sareeyo. Waxaa lagu hirgeliyay barnaamijka 'Apple's U1 chip', kaas oo u diraya digir qalabka kale ee U1 ku qalabaysan sida iPhone. Waxay kaloo adeegsataa Bluetooth si ay ula xiriiraan aaladaha Apple. Macluumaadka ku saabsan AirTags ee ku dhow iyo xogta la xiriirta goobta ayaa markii dambe loo diraa shabakadda Raadi My.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » AirTags lumay ayaa laga heli karaa xitaa iyadoo la adeegsanayo Android
"Hello new iMac" waa ku dhawaaqida rasmiga ah ee Apple
Burcad burcad ah ayaa Apple ugu hanjabtay inay daabacayso qorshayaasha MacBook